ကမ္ဘာကျော်ကြား ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကမ္ဘာကျော်ကြား ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Oct 10, 2011 in Buddhism, Science & Religion | 13 comments
famous buddha status
ဒီထိုင်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကတော့ တရုတ်ပြည် အနောက်ပိုင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ၇၁၃ ခုနှစ်မှာ စတင် တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၈၀၃ ခုနှစ်တိုင်အောင် ပြီးပြတ်အောင် တည်ဆောက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ အမြင့်ဟာ ၇၁ မီတာ (၂၃၃ ပေ) အမြင့်ရှိပြီး လက်ချောင်းတော်များကတော့ ၁၁ ပေ အရှည်ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တည်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဘီစီ ၄၃ မှာ ထုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ ထုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အေဒီ ၄ ရာစုမှာတော့ ရဟန်းတော်များက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၇၇၉ ခုနှစ်ရောက်မှသာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ကိုယ်မှာ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ ရွှေသင်္ကန်းကိုတော့ ထိုင်းဘုရင်က ရာသီအကူးအပြောင်းတစ်ခုမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အခမ်းအနားတစ်ခုမှာ ပူဇော်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ အမြင့်ဟာ ပေ ၄၀ ရှိပြီး အလေးချိန်ကတော့ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၉၃ တန် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို Joko လို့ခေါ်တဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးက ၁၂၅၂ ခုနှစ်မှာ သွန်းလုပ် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာရဲ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေထဲက တစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရှေးအကျဆုံး ဘုရားတစ်ဆူလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလျောင်းတော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဘန်ကောက်မြို့ မတည်ခင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက်ကတည်းက ထုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လျောင်းတော်မူ အလျားအားဖြင့် ၄၆ မီတာ ရှိပြီး အမြင့်ကတော့ ၁၅ မီတာ ရှိပါတယ်။ ဒီလျောင်းတော်မူဗုဒ္ဓရဲ့ ခြေတော်မှာတော့ ၁၀၈ ကွက် ဗုဒ္ဓစက်ကို သွန်းလုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တည်ရှိတဲ့ ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ သွန်းလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေထဲမှာ တစ်ဆူအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး ၃၉၄ ပေ အမြင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ တည်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူဖြစ်ပြီး ၁၂ ရာစုမှာ သွန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလျောင်းတော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟာ အတိုင်းအတာအားဖြင့် အလျား ၄၆ ပေ ရှည်ပြီး ၂၃ ပေ အမြင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဓယမြို့မှာ တည်ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေထဲက တစ်ဆူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း မုံရွာမြို့မှာ တည်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ ဖြစ်ပါတယ်။ လျောင်းတော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လျောင်းတော်မူ ဖြစ်ပါတယ်။ အလျားအားဖြင့် ပေ ၃၀၀ ရှိပြီး ဦးခေါင်းတော်ပိုင်းကတော့ အမြင့်အားဖြင့် ပေ ၆၀ မြင့်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ စတင် သွန်းလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်တော်မူ ဘုရားကြီးကိုတော့ တည်ဆောက်ခဲ့တာကတော့ သိပ်ပြီး မကြာသေးပါဘူး။ ရပ်တော်မူ ဘုရားကြီးဟာ အမြင့်အားဖြင့် ၄၃၃ ပေ အမြင့်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေထဲမှာ တစ်ဆူ အပါအဝင် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဟောင်ကောင်နိုင်ငံ Lantau ကျွန်းမှာ တည်ရှိပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက် ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ အမြင့်အားဖြင့် ပေ ၁၁၀ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ညာလက်တော်ဟာ ရောဂါဘယ ဘေးဒုက္ခတွေကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဒူးခေါင်းတော်ပေါ် တင်ထားတဲ့ ဘယ်လက်တော်ကတော့ သာယာ ချမ်းမြေ့ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Hyderabad မြို့က Artificial Lake ရဲ့ အလယ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ရဲ့ အမြင့်က ၅၆ ပေရှိပြီး တန်ချိန်အားဖြင့် တန်ပေါင်း ၃၂၀ ရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့စဉ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ရုပ်ပွားတော်ဟာ ရေကန်ထဲကို ပြိုကျသွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တည်ဆောက်ရေး အလုပ်သမား ၈ ယောက် သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယ အစိုးရက ပြန်လည် ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
source : http://www.touropia.com/
အပေါ်ဆုံးက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို .. တရုတ်သိုင်းကားထဲမှာ တွေ့ဖူးတယ် .. ဟီး .. !
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ပုံ (7) မှာ သစ်ပင်တွေကြားထဲ ညပ်နေတာ ကြည့်မကောင်းပါဘူး..ဘယ်သူက ဒီလိုမျိုး ထုလုပ်လိုက်လဲမသိဘူး….
သစ်ပင်တွေ ကြားထဲ ညပ်နေတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
ညောင်ပင်ရဲ့ အမြစ်တွေက ရုပ်ပွားတော်ကို ၀ါးမြိုထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
ဟာ…… ဘုရားကဒီလောက်တန်ခိုးကြီးတာ အပင်က ၀ါးဖို့နေနေသာ…ဘုရားနဲ့ လိုက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ မာန်နတ်တောင် ဘုရားကို ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူး…….( မေတ္တာဓါတ်နဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ..အောင်ခြင်းနဲ့…. )
thanks for photos sharing ,
ဆရာအန်စာတုံးခင်ဗျား ipad2 ကမြန်မာဖွန့် download လို့ရပါလားဗျာ သိပါရစေ thanks
ကျွန်တော့်ကို ဆရာလို့ မသုံးနှုန်းပါနဲ့လား ခင်ဗျာ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က အာပလာ မို့ပါ။
အခု kocho မေးတဲ့ ipad2က မြန်မာဖွန့် ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ရလားဆိုတာထက် ipad2 မှာ မြန်မာဖွန့် မရဘူးလို့ သိရပါတယ်။
jail break လုပ်ရင်တော့ ရမလားပဲ။
ဒါက ကျွန်တော် သိသလောက် ပြောလိုက်ရတာပါ ခင်ဗျာ ။
(comment မှာ ရေးမယ့်အစား ကျွန်တော့်ရဲ့ anzartone@gmail.com ကို mail ပို့နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပြီးတော့ http://anzartone.freezoka.net က နည်းပညာ catagory မှာလည်း အချို့အချို့သော နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။)
thanks for your reply by the way, we r all together (myanmar born) :D
ဂေဇက်ကတဆင့် နိုင်ငံစုံအောင်ဖုရားဖူးထွက်လိုက်ရပေမဲ့ ဒီလောက်နဲ့တော့ မကျေနပ်သေးလို့ ထပ်တင်ပေးပါအုံးဗျာ။
ူLone ရေ.. ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ မျက်နှာတော်ဟာ သစ်ပင်ထဲ ညပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး….
အယုဒ္ဓယမြို့မှာ မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဘုရားတွေဟာ ပျိုကျပျက်စီးပြီး မြေအောက်ထဲကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်.. နှစ်ကာလကြာတော့ အဲ့ဒီညောင်ပင်ကြီးရဲ့ အမြစ်တွေက ဘုရားဦးခေါင်းတော်ကို မြေပေါ်ကိုရောက်ရှိအောင် ဆွဲတင်လာခဲ့သလိုဖြစ်ပြီး ဦးခေါင်းတော်ကြီးဟာ အမြစ်တွေကြားထဲမှာ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ…..အတော်ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးပါပဲ…………..